China akatsvaka kubvisa nezvemhosva vavariro yacho chicherwa-vapfumi Antarctica neMuvhuro, pamwe mukuru vachiti Beijing haana urongwa kutanga kuchera ari kondinendi huru. China kuti kuwedzera mabasa mu polar nharaunda iri rainyanya kukosha sezvo Beijing inoshanyirwa musangano wegore negore of Antarctic T ... Read more »
Argentina zvakaitika mutemo mutsva mugodhi vhiki rino
Post nguva: May-10-2017
Zviremera Argentine, indasitiri vatambi uye mibatanidzwa vanotarisirwa kusaina svondo rino refu akamirirwa mugodhi chibvumirano munhu yeUnited kuti zvinobatanidza huripo mitemo munyika, sezvo chikamu ziendamberi kuedza kusvetukira-kutanga mari iri nemauto. Rudzi, kamwe kufarira pakuchera vanoita, ha ... Read more »
Hazvina liftoff! Ndege China-akavaka zvinotora kudenga
The-refu akamirirwa China Homegrown ndege C919 anosimudza kure pamusoro wayo musikana ndege pa Shanghai Pudong International Airport neChishanu. Around 3,000 vanhu vakaona munhau nguva mapatya-injini, chimwe-mukana ndege kuti debut. The C919 Chirongwa kwakatangwa muna 2006. Vaviri imi ... Read more »
SA kuchera chiito yokudzokorora dzinokwezva 131 submissions kubva kuvarimi, miners uye mapoka indasitiri
Varidzi uye ubanguranyika makambani vari pakati mapoka 131 yekurara submissions nharo nyaya dzavo pamusoro mamiriro ongororo pakuchera chiito South Australia vake. Mutauriri Mineral Resources uye Energy Minister Tom Koutsantonis akati "kamwe submissions vari yabatanidza" vangadai kuitwa pachena asi ... Read more »
Mining mitemo: zvakawanda, kunonoka
Post nguva: Apr-27-2017
The-refu akapikisana yakabvumira kugadziriswa kwemutemo wekuita kuti mugodhi mitemo ano zvava Musanyura pasi zvikanganiso nzira uye vokupedzisira yemaminitsi kuwedzererwa kuti zvichaita kuvhura kuti yepamutemo dambudziko. Kunyange kana Mineral & Petroleum Resources Development Act (MPRDA) Amendment Bill ari akapfuura ... Read more »
Modern Mining uye Technology Week kicks kure muna Sudbury
Panguva apo yemigodhi indasitiri ari kuwana gungwa kuchinja zvemichina uye utsanzi, zviri kumbobvira kukosha kuita vechidiki ovadzidzisa pamusoro mikana iripo mune zvekutepfenyura. Ndizvo shoko akagoverana musi April 21 panguva wepagore mabhizimisi luncheon kukava kure Mode ... Read more »
Italian nemapurisa vanofamba anorova musi Great Wall
Post nguva: Apr-25-2017
Sere Chinese nemapurisa achaenda mberi patrol muItaly mukutanga June kubatsira vazvo Italian kudzivirira Chinese vashanyi, mumwe mukuru mupurisa akati neMuvhuro. Vatariri, akasarudza munyika uye nyanzvi wokuItaly, achaita vaende yevedza makwapa muRoma, Milan, Florence uye Naples kuti ... Read more »
Gunnedah murume akahwina NSW Mining Young Achiever Award
Post nguva: Apr-20-2017
Gunnedah zvaJehovha Murray O'Keefe ari "chuffed" pashure pokunge vakasarudzwa kugamuchira NSW Mining Young Achiever Award. The Gunnedah Shire wepachitsuwa uye Whitehaven Coal mushandi pakaziviswa sezvo Kumukundi panguva NSW Mining Industry uye Suppliers 'Awards pana NSW Parliament House apfuura mwedzi uno. Mumwe vaviri ... Read more »
Australia greenlights Rio Tinto kuti $ 2.45bn kutengesa mumigodhi yemarasha kuna Yancoal
Post nguva: Apr-14-2017
Zviremera Australian ndapa Yancoal (ASX: YAL), kuti chikamu kuti China Yanzhou Coal Mining, munyoro chiedza kuenda mberi kwayo akaronga $ 2.45 billion pakuunganidza Rio Tinto raMwari (ASX, Lon: RIO) chafariz marasha yesangano iri Hunter Valley. The Foreign Investment Review Board mvumo ichocho, ... Read more »
It fiore ubanguranyika kuti vomurova kuchera chirongwa muChile
It fiore ubanguranyika CEO, Tim Warman, akazivisa kutanga kuchera rutsigiro panguva chekambani Pampas El Peñón goridhe Chirongwa Chile, inotaura nyika chete Geological ezvinhu sezvo Yamana kuti flagship El Peñón wangu. Warman akataura MINING.com mwedzi rokupedzisira 2017 Prosp ... Read more »